यस्तो छ बाहुबलीकी देवसेना अनुष्का शेट्टीको कार कलेक्सन | Automotive News Nepal
यस्तो छ बाहुबलीकी देवसेना अनुष्का शेट्टीको कार कलेक्सन २२ कार्तिक, २०७६
साउथ इन्डियन सिनेमाकी चर्चित नायिका अनुष्का शेट्टीले आज ३७ औं जन्मदिन मनाइरहेकी छिन् । उनी सन् १९८१ नोभेम्बर ७ मा कर्णाटकमा जन्मेकी थिइन् । सन् २००५ देखि फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी अनुष्काले हालसम्म आउँदा अनेकौं कारहरुको कलेक्सन गरेकी छिन् । यस्तो छ उनको कार कलेक्सन ।
औडी ए६ मा २.० लिटरको टीएफएसआई बीएस–६ मापदण्डयुक्त इन्जिन जडान गरिएको छ जसले ५०००–६००० आरपीएममा १८० किलोवाटको पावर र १६००–४५०० आरपीएममा १४२ एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ । सो कारमा ७ स्पिड एस ट्रानिक गियरबक्स समावेश गरिएको छ । सो कारको शुरुवाती एक्स सोरुम मूल्य ५४ लाख २० हजार भारु छ ।
औडी क्यु५ मा दुई इन्जिनको विकल्प रहेको छ । सो कारको डिजेल भेरिएन्टमा १९६८ सीसीको डिजेल इन्जिन जडान गरिएको छ जसले ३८००–४२०० आरपीएममा १९० एचपीको पावर र १७५०–३००० मा ४०० एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ । सो कारको पेट्रोल भेरिएन्टमा १९८४ सीसीको पेट्रोल इन्जिन जडान गरिएको छ । जसले ५०००–६००० आरपीएममा २५२ एचपीको पावर र १६००–४५०० मा ३७० एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ । सो कारको एक्स शोरुम मूल्य ५५ लाख भारु रहेको छ ।
टोयोटा कोरोल्ला अल्टिस कारमा १७९८ सीसीको डिजेल इन्जिन जडान गरिएको छ । जसले ६४०० आरपीएममा १४० पीएसको पावर र ४००० मा १७३ एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ । सो कारको एक्स शोरुम मूल्य लगभग १६ लाख ४५ हजार भारु रहेको छ ।
टीभीएसको फेसबुक पेजमा आज लाइभ आउदै डा. शेरबहादुर पुन, कोरोना वारेमा राख्नुस् प्रश्न
काठमाडौं – कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को वारेमा जान्न मन छ ? यसका लागि आज जगद...
मोदी नेपालभ्रमणको तयारी गर्दै, रेलमार्गबारे सम्झौता गरिने
काठमाडौँ — भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालभ्रमणको त...
हुन्डाईको नयाँ गाडी ‘भर्ना’, आज सार्वजनिक हुदै
काठमाडौं - हुन्डाईले आफ्नो नयाँ संकरण ‘द नेक्स्टजेन भर्ना’ आज सार्वजनिक हुदै छ ।...